राहत सामाग्री बोकेर मुख्यमन्त्री पोखरेल मनाङमा — donnews.com
१सुदूरपश्चिमः दसैँमा नौजनाको मृत्यु
२मकवानपुरमा टाटा सुमो दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु
३सर्लाहीमा एक जना हतियारसहित पक्राउ
४बेनी–बगरफाँट–बरङ्जा सडकको स्तरोन्नति सुरु
५मंगलबारसम्म काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना
६एकाबिहानै गोरखा केन्द्रविन्दु भएर ४.३ म्याग्निच्युडको भूकम्प
७डलरको भाउ स्थीर, अरुको के छ अवस्था ? (सूचीसहित)
१०चीनको सीमावर्ती क्षेत्र ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका-७ मौवटारस्थित गोठमा याकलाई नुन खुवाउँदै एक किसान
११पिङमा रमाउँदै स् बागलुङको गलकोट नगरपालिका–७ मल्ममा दशैँका बेला पिङ खेलेर रमाउँदै बालबालिका
१२भटमास झार्दै किसान : बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–३ खिरेगाउँका किसान भटमास झार्दै ।
'यार्सागुम्बा टिप्न गएका ७५ जना गाउँलेहरु यतिबेला लेकमा नै अलपत्र'
तस्विर सौजन्य : प्रकाश ढकाल
पोखरा । अबिरल परेको बर्षाका कारण गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढि क्षति पुगेको मनाङ जिल्लामा राहत सामाग्री बोकेर आज मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहितको टोली पुगेको छ । टोलीले केही थान त्रिपाल, खाद्यान्न र औषधीहरु सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत् लगेको हो ।
टोलीमा मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित मन्त्री राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे र सांसद चिन्ताबहादुर घलेसहित सञ्चारकर्मी रहेका छन् । राहत बितरण गरेर प्रभु एयरको हेलिकोप्टरमा आजै पोखरा फर्किने कार्यक्रम रहे पनि खराब मौसमका कारण आउन नसकेको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिए ।
राहत र उद्धारका लागि पुगेको मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेलाई राहत सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गरेका थिए । बाढी पीडितहरुसँग मुख्यमन्त्री पोखरेलले भेटघाट गर्दै प्रदेश सरकार जनताको उद्धार र राहत कार्यका लागि प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।
मनाङमा वाढी पीडितहरु केही नयाँ कारागार भवनमा, केही ओढार भन्ने ठाउँमा बसेका छन् । घरबाट खाली हात निस्किएका त्यहाँ गाउँलेहरुलाई खानेपानी र खाद्यान्नको समस्या देखिएको छ । कोरोना संक्रमणका बेलामा एकै ठाउँमा गाउँलेहरु बस्नु पर्दा अलि त्रसित पनि देखिएका छन् । त्यसैगरी मनाङको फु भन्ने ठाउँमा यार्सागुम्बा टिप्न गएका ७५ जना गाउँलेहरु यतिबेला लेकमा नै अलपत्र परेका छन् । हेलिकोप्टर जान पनि अफ्ठ्यारो ठाउँ भएकोले सेनाको टोली भोलि विहानैदेखि उद्धारका लागि खटिने भएको छ ।
सेनाको हेलिकोप्टरले त्यहाँका जनताहरुलाई उद्धार गर्ने र मुख्यमन्त्रीसहितको टोली प्रभु एयरको हेलिकोप्टरबाट फर्किने कार्यक्रम रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिए । प्रवक्ता खड्काका अनुसार यतिबेला राहत वितरण गर्न पुगेको मुख्यमन्त्रीसहितको टोली मनाङको बगरछापमा सुरक्षित अवस्थामा रहेका छन् ।
अविरल परेको बर्षाका कारण मनाङमा ठुलो क्षति पुगेको छ । मनाङको नासो गाउँपालिका वडा नं. ३ धारापानीमा मस्र्याङ्दी नदीमा आएको बाढी कारण थोचे ताचे जाने पुल, प्रभु बैंक, कैलाश बैंक, नासो गाउँपालिकाको कार्यालय भवन, यथलैया होटल, सिमा प्रहरी चौकी, धारापानीको भवन बगाएको छ । अहिलेसम्म पनि तालगाउँ पुरै डुबानमा छ । त्यहाँ आफ्नो घरमा गाउँलेहरु जान सक्ने अवस्था अझै छैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछानेका अनुसार धारापानी क्षेत्रमा २ वटा झोलुंगे पुलसमेत बगाएको छ । बाढीका कारण ताल गाउँका करिब ५०/६० घर डुबानमा परेका छन् भने सडक भत्किएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्ने अवस्था पनि छैन ।
भौतिक क्षति ठुलो भएपनि मनाङमा तत्कालै उद्धार गरिएको हुँदा मानवीय क्षति हुन नपाएको प्रजिअ लामिछानेले जानकारी दिए । गाउँलेहरुलाई जिल्ला कारागारको नयाँ भवनमा सुरक्षित राखिएको छ । बाढीका कारण टेलिफोन सम्पर्क टुटेको छ भने पोलहरु ढल्दा मनाङ विद्युत विहिन अवस्थामा पुगेको छ ।